आज महानायक राजेश हमालको जन्मदिन, कति औं वर्षमा पुगे ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/आज महानायक राजेश हमालको जन्मदिन, कति औं वर्षमा पुगे ?
सुपरस्टार राजेश हमाल आजबाट ५६ वर्षमा लागेका छन् । ९ जुन, १९६४ मा पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका हमालले २०४८ सालमा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘युगदेखि युगसम्म’ बाट नेपाली रजतपटमा पाइला राखेका थिए । यस फिल्मपछि उनले आफ्नो करिअरमा कहिल्यै पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेन । ३ दशक लामो फिल्म यात्रामा उनले २ सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् । हामी तीन भाइ, देउता, अल्लारे, अजम्बरी नाता, पालेदाई, आशीर्वाद जस्ता फिल्म उनका हिट मानिन्छन् ।